Xagee ku dambeeyeen Hogaamiyaasha Kooxda Al-Shabaab? | KEYDMEDIA ONLINE
25 November 2020 Ridwaan Xirsi: Farmaajo wuu fashilmay
25 November 2020 RW Rooble oo 3 maalmood kadib ku laabtay Muqdisho
25 November 2020 Farmaajo oo saddex fariin looga soo diray Shirka Musharixiinta
25 November 2020 Toddoba qof oo isku qoys ah oo lagu dilay Waajid
25 November 2020 Qarax ka dhacay duleedka Caasimadda Soomaaliya
25 November 2020 Dufaanta Gati oo barakicisay Kumanaan qof
25 November 2020 RW Rooble: Waxaan diyaar u ahay inaan qanciyo musharraxiinta
25 November 2020 Abiy Axmed oo ka digay Faragelin shisheeye
25 November 2020 Laftagreen oo diidan in wax laga badalo Guddiga doorashooyinka
25 November 2020 Itoobiya: QM oo ka digtay dambi dagaal
25 November 2020 Farmaajo oo bohol uusan kasoo bixi karin kusii socda
24 November 2020 Dhacdo argagax leh: Askari bam ku laayay qoyskiisa
24 November 2020 Jawaari oo ku biiray Shirka Musharixiinta
24 November 2020 Dagaal ka qarxay gobolka Hiiraan
24 November 2020 Shariif Xasan: “Doorasho hal wareeg ah waan diidnay”
24 November 2020 Itoobiya oo beenisay in hubka laga dhigay Askar Tigray ah oo jooga Soomaaliya
24 November 2020 Goorma ayaa Shirka Musharraxiinta la soo gaba-gabeynayaa?
24 November 2020 RW Rooble oo kormeeray Taliska 60aad ee xoogga dalka
24 November 2020 Musharraxiinta ku shirsan Muqdisho oo guddoomiye doortay
24 November 2020 Dowladda Itoobiya oo amar ku bixisay xarigga dad lala xiriiriyay dagaalka gobolka Tigray-ga
Xagee ku dambeeyeen Hogaamiyaasha Kooxda Al-Shabaab?
Keydmedia Online Exclusive - Markii Al-Shabaab ay waayeen magaalooyin badan oo muhiim u ahaa isla markaana ku yaala gobalada Soomaaliya, maamuli jireenah Sanado badan ayaa waxaa kala firxaday Hogaamiyaasha ugu sareeya Kooxda.
Hogaamiyaasha oo isugu jira Soomaaliya yo Ajaanib isla markaana kala kala sareeya ayaa haatan mid walba wuxuu ka dhacay meel gaar ah, inkastoo qaarkood ay isla joogaan.
Dadka la socda Arimaha kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee Al-Shabaab ayaa sheegaya in ay kala fogaadaan Hogaamiyaasha Al-Shabaab ay sabab u tahay kal sooni daro soo kala dhexgashay labadii Sano ee ugu danbaysay.
Keydmedia Online oo mudo baaraysay Warbixintaan ayaan heshay Xog ku aadan meelaha ay u badanyihiin hogaamiyaasha Al-Shabaab qaarkood, inkastoo ay yihiin kuwo guur guura markasta ayaga oo ka fikiraya in la soo beegsado, ama la soo weeraro.
Hogaamiyaha ugu sareeya Al-Shabaab oo lagu magacaabo Axmed Godane, laakiin la baxay Muqtaar Abuu Subayr, iyo waliba saraakiil kale oo aanan magacyadooda la sheegin oo aad isugu kal soonyihiin ayaa waxay ku dhuumaalaysanayaan deegaano ka jirsan Shabeelaha Hoose, waxaana ay u badanyihiin dhulka Miyga ah, iyadoona mar mar uu tago Abuu Subayr magaalada Barawe oo ah mid ah meelaha ugu muhiimsan oo Al-Shabaab wali ay maamulaan.
Sidoo kale waxaa si caadi ah u dagan magaalada Baraawe masuuliyiin uu ka midyahay Sheekh Xasan Daahir Aways oo ka mid ah saraakiisha Al-Shabaab laakiin aanan xilal sar sare aanan ka hayn.
Sheekh Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur ayaa wuxuu ku suganyahay deegaano ka tirsan gobalka Baay sida ay Keydmedia Online u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay.
Afhayeenka Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere) iyo Fu’aad Shangole, oo ayaguna ka mid ah raga sar sare ee Al-Shabaab ayaa waxay u badanyihiin socod waxaana markasta ay tagaan deegaano hor leh oo ka mid ah dhulka ay kooxdu wali maamusho, sidoo kale Cali Dheere ayaa Bishii lasoo dhaafay lagu arkay Gobolka Galgaduud ee Bartamaha Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa jira Saraakiil kale oo ka tirsan Al-Shabaab oo u gudbay dhanka deegaanada Maamulka Puntland gaar ahaan dhulka buuraha leh ee gobalka bari.
Hogaamiyaasha ugu sareeya Al-Shabaab ee ku kala sugan meelahaasi kala duwan inta badan kulamo toos ah ma yeeshaan qaarkoodna isla markin mudooyin badan laakiin waxaa yiri xiriir ka dhaxeeya oo kala warqaadasho ah.
Awooda Al-Shabaab oo sii wiiqmaysa ayaa waxaa sabab looga dhigaya kal soonidii iyo is aaminaadii ka dhaxaysay kooxdaan oo gabi ahaanba burburtay, iyo Ajaanibta Al-Shabaab oo ka baqaya in ay shirqoolaan qaar ka mid ah xubnaha kooxda.
Ridwaan Xirsi: Farmaajo wuu fashilmay
Warar 25 November 2020 19:57
Madaxweynaha ayaa ku fashilmay siyaasadda, hirgelinta Federaalka, amniga iyo qabashadda doorasho qof iyo qof ah oo uu balan-qaadey markii la doortay 4 sano kahor.
RW Rooble oo 3 maalmood kadib ku laabtay Muqdisho
Warar 25 November 2020 18:54
Farmaajo oo saddex fariin looga soo diray Shirka Musharixiinta
Warar 25 November 2020 18:28
Toddoba qof oo isku qoys ah oo lagu dilay Waajid
Warar 25 November 2020 18:10
Qarax ka dhacay duleedka Caasimadda Soomaaliya
Dufaanta Gati oo barakicisay Kumanaan qof